ပန်းဘဲတန်း မြို့နယ်တွင် ငြိမ်းချမ်းရေး ရောင်စုံ နောက်ဖေးလမ်းကြား ဥယျာဉ် ဖွင့်လှစ် - Yangon Media Group
ပန်းဘဲတန်း မြို့နယ်တွင် ငြိမ်းချမ်းရေး ရောင်စုံ နောက်ဖေးလမ်းကြား ဥယျာဉ် ဖွင့်လှစ်
ရန်ကုန်၊ မေ ၂ဝ
ပန်းဘဲတန်းမြို့ နယ်အတွင်း လေးခုမြောက်နောက် ဖေးလမ်းကြားဥယျာဉ်တစ်ခုဖြစ်သည့်ငြိမ်းချမ်းရေး ရောင်စုံနောက် ဖေးလမ်းကြားဥယျာဉ်ကို မေ ၂ဝ ရက် နံနက် ၉ နာရီကဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါငြိမ်းချမ်းရေးရောင်စုံနောက်ဖေးလမ်းကြားဥယျာဉ်ကို ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် ၂၉ လမ်းနှင့် ရွှေဘုံသာလမ်း(အထက်ဘလောက်)တွင် ဖော်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ပေ အရှည် ၇၅ဝ၊ ၁၆ ပေ လေးလက်မ အကျယ်အဝန်းတွင် ငြိမ်းချမ်းရေး သရုပ်ဖော်ကျူးသည့်ဆေးရောင်စုံပန်းချီလက်ရာများရေးဆွဲထား သောနောက်ဖေးလမ်းကြားဥယျာဉ် တစ်ခုအဖြစ် ဖော်ဆောင်ထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းနောက်ဖေးလမ်းကြားသည် လမ်းမတော်မြို့နယ်တွင် အရှည်ဆုံးနောက်ဖေးလမ်းကြား တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကျန်နောက်ဖေးလမ်း ကြားများကိုလည်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ၏ဘတ်ဂျက်ခွဲဝေရ ရှိမှုပေါ်မူတည်ကာ ဆက်လက် ဖော်ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဦးနေဖူးဘဆွေက မေ ၂ဝ ရက်တွင်ဒီမိုကရေစီတူ ဒေးသို့ပြောသည်။ ”ခုဒီနောက်ဖေးလမ်းကြား ဥယျာဉ်ဖွင့်ပွဲကို EU5 နိုင်ငံသံရုံးကသံအမတ်တွေကိုယ်တိုင် တက် ရောက်ခဲ့ကြတယ်။ ဒီမိုကရေစီဆိုတာပြည်သူတွေပူးပေါင်းပါဝင်မှု အခြေခံကနေစတာဖြစ်လို့ ပြည်သူပူးပေါင်းပါဝင်တဲ့လုပ်ငန်းမှန်သမျှ သူတို့ကအားပေးကြတယ်။ ဒီအစိုးရငါးနှစ်သက်တမ်းအတွင်း မှာ ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့နောက်ဖေးလမ်း ကြားဥယျာဉ်တွေအဖြစ် ကိုယ်စားလှယ်တွေအားလုံးကဖော်ဆောင်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိသလို NGO တွေကလည်းပါဝင်ပြီး အစိုးရကလည်း ဘတ်ဂျက်ခွဲဝေမှုနဲ့ဖြစ်မြောက် အောင်ဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။
ယခုထပ်မံဖွင့်လှစ်သည့်နောက် ဖေးလမ်းကြားဥယျာဉ်တွင် လူ့အခွင့်အရေးကိုပုံဖော်ထားသည့် ပန်းချီများလည်းရေးဆွဲပုံဖော်ထား ကြောင်းသိရသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းဖော်ဆောင်နေသည့်နောက် ဖေးလမ်းကြားဥယျာဉ်များအတွက် ကုန်ကျစရိတ်၏ ၈ဝ ရာခိုင်နှုန်းကို ဒို့အိမ်အဖွဲ့ကကျခံပြီး ကျန် ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်းကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနှင့် သက်ဆိုင်ရာလမ်းသူလမ်းသားများက ပူးပေါင်းဖော်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ် သြဂုတ်လမှစတင်၍ မြို့တွင်းခြောက်မြို့နယ်ရှိနောက်ဖေးလမ်းကြားအမှိုက်ရှင်းလင်းခြင်းကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ရာမှ ကျယ်ဝန်းသည့်နေရာအနေအထားများတွေ့ရှိသည့်အတွက် ဒို့အိမ်အဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်း၍ နောက်ဖေးလမ်းကြားဥယျာဉ်များဖော်ဆောင်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းဥယျာဉ်များတွင် သစ်ပင်၊ ပန်းပင်များစိုက်ပျိုးခြင်း၊ ကလေးကစားရန် ဒန်းများ၊ လေ့ကျင့်ခန်းစက်၊ စာကြည့်တိုက်နှင့်နံရံဆေးရေးပန်းချီများဖြင့် အလှဆင်ထားကြောင်း သိရသည်။
ဒို့အိမ်နှင့်ရန်ကုန်စည်ပင်တို့ပူးပေါင်း၍ ၂၇ လမ်းအောက်ဘလောက်တွင်နောက်ဖေးလမ်းကြားဥယျာဉ်စတင်ဖော်ဆောင်ခဲ့ပြီး ယခုအခါပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်တွင် နောက်ဖေးလမ်းကြားဥယျာဉ် လေးခုအပါအဝင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း နောက်ဖေးလမ်းကြားစုစုပေါင်းခြောက်ခုဖွင့်လှစ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါငြိမ်းချမ်းရေးရောင်စုံ နောက်ဖေးလမ်းကြားဥယျာဉ်ဖွင့်ပွဲသို့ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ဦးမောင် မောင်စိုး၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်ရှိ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဒို့အိမ်အဖွဲ့နှင့် EU ကိုယ်စားလှယ်များကဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီး ရပ်ကွက်နေပြည်သူများနှင့် အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများတက် ရောက်ခဲ့ကြသည်။
နေပြည်တော်တွင် မြေငှားရမ်းထားပြီး လုပ်ငန်းဖော်ဆောင်ခြင်း မရှိသော်လည်း ဌာနဆိုင်ရာများက အေ?
မန်ယူ ကွင်းလယ်ကစားသမား ဖရက်ဒ် အသင်းအတွက် ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့သည့် ၅ဝဝ ဦးမြောက် ကစားသမား အြ?
မြစ်ကြီးနား၌ အရှိန်လွန်ပြီး လမ်းလယ်စတီးသံပန်းကို ဝင်တိုက်မိသည့်ယာဉ်တစ်စီး တိမ်းမှောက်
ကျပ်သိန်းထောင်ချီ အဂတိ လိုက်စားမှုမှ စွပ်စွဲခံအငြိမ်းစား ဗိုလ်ကြီး အာမခံလျှောက်
ချစ်သူဟောင်းကို သတိတရနဲ့ တင်ခဲ့တဲ့ပို့စ်ကို ချက်ချင်း ပြန်ဖျက်လိုက်တဲ့ အရီနာဂရန်ဒီ